कसरी हुन्छ आँखाको क्यान्सर ?
आँखामा क्यान्सर (रेटिनोब्लास्टोमा) हुन्छ भन्ने जनचेतना नहुँदा आँखाको क्यान्सरका बिरामीह बढ्दै गएका छन् ।रेटिनोब्लास्टोमा बालबालिकामा हुने एक किसिमको आँखाको क्यान्सर हो ।
करिब १५ देखि २० हजार नवजात शिशुमध्ये एक जनामा यो रोग देखा पर्न सक्ने तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. सन्दुक रुइतले बताए । ५ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकामा यस्ता समस्या देखिने गरेको रुइत बताउँछन् ।
अस्पतालतर्फका उपनिर्देशक प्रा.डा. रोहित सैजुका अनुसार ‘प्रायः मानिसहरुलाई आँखाको क्यान्सरबारे जानकारी नै छैन । ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको आँखाको नानीको कालो भागमा एक किसिमको अनौठो सेतो ज्याति (सेतो टीका) देखिनु, असामान्य रुपमा आँखा रातो हुनु, आँखाको आकार ठूलो हुनुका साथै आँखाको डेढोपनाका रुपमा पनि यो रोग देखा पर्न सक्ने डा. सैजु बताउँछन् ।
नेपाललगायत विकासोन्मुख देशमा यस रोगबाट हुने मृत्युदर ३०–७०% रहेको छ । विकसित देशमा भने १ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । यो रोग समयमै उपचार नभएमा बालबालिकाको दृष्टि गुम्नुुका साथै शरीरको अन्य अङ्गमा फैलिएर ज्यानसमेत जान सक्ने प्रा.डा. रोहित सैजुले बताए । तर, प्रारम्भिक अवस्थामा पत्ता लगाई उपचार गरेमा समाधान हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
लेजर, क्रायोथेरापी, केमोथेरापी तथा रेडियोथेरापी गरी यो रोगको उपचार गरिन्छ । ढिलो अवस्थामा पगेका बिरामाीका आँखाको डल्लो नै निकाल्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानका अकुलोप्लास्टिक सर्जन तथा नेप्लिज सोसाइटी अफ अकुप्लास्टिक सजर्नका महासचिव डा. बेन लिम्बुले जनचेतनाको अभावका कारण मृत्युदर बढ्दै गएको बताए ।
जनचेतना नहुँदा बिरामीहरु उपचारका लागि ढिलो अस्पताल आउने र आर्थिक अभावको कारण उपचार नगरी फर्कने गरेकोले मृत्युदर बढ्दै गएको उनी बताउँछन् । बिरामी ढिलो गरी अस्पताल आउँदा आँखाको डल्लो नै निकाल्नुपर्ने र कतिपय बिरामीको मृत्युसमेत हुने डा. बेन लिम्बु बताउँछन् ।
जनचेतनाका लागि तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठान तथा आँखाको प्लास्टिक शल्यचिकित्सासम्बन्धी नेपाली चिकित्सक समाजको संयुक्त आयोजनामा रेटिनोब्लास्टोमा (आँखाको क्यान्सर) रोग विश्व रेटिनोब्लास्टोमा सचेतना सप्ताह सुरु भएको छ ।
आँखाको क्यान्सरबारे देशभरका २७ वटा अस्पतालमा अनुसन्धान गर्न थालिएको र जनचेतनाका लागि कार्यक्रमहरु आयोजना गरिएको छ । प्रतिष्ठानमा वार्षिक ३५ देखि ४० को संख्यामा नयाँ बिरामीहरु आउने गरको आँखाको क्यान्सर विशेषज्ञ डा. पूर्णिमा राजकर्णिकारले बताए । उनका अनुसार तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानमा शल्यक्रियाबिना पनि नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी उपचार भइरहेको छ ।
विकासोन्मुख देशहरुमा अधिकतम मृत्युदर हुनुको प्रमुख कारणहरुमा अशिक्षा, अन्धविश्वास, गरिबी तथा दक्ष चिकित्सकको अभाव र उपकरणहरुको अभाव हुन् । समयमा नै रोगको निदान र उपचार गर्न सकिएमा आफ्नो बालबालिकाको दृष्टि, आँखा र जीवनको सुरक्षा गर्न सकिने चिकित्सक बताउँछन् ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख ३०, २०७६, ०३:४६:००
तीन वर्षमा १६ हजारले गरे आत्महत्या, बढी आत्महत्या झुन्डिएरै
डडेल्धुराका ५ स्थानीय तह दमकलविहीन